Manchester City Oo Guul Muhiim Ah Ka Gaartay Everton %
Manchester City Oo Guul Muhiim Ah Ka Gaartay Everton
Manchester City ayaa waxay ujirtaa labo kulan inay ku guuleysto horyaalka Premier League ee wadanka Ingiriiska labo kulan oo qura kadib markii ay guul weyn ay kaga gaareen minankooda uga gaareen naadiga kubada cagta Everton.
Ciyaartii Man City iyo Everton oo guud ahaan kusoo dhamaatay 3-1 ayaa waxaa Everton goolasha looga hormary qeybta koowaad, iyadoona lagu boobsiiyay 3-0, tasoo keentay in qeybta labaad ay awoodi weysay inay iska soo gudo, inkastoo ay shaqo fiican ay qabteen.
Goolasha ayaa waxay ka kala heshay Man City ciyaartoyda kala ah: Leroy Sané oo daqiiqadii 4aad dhaliyay, Gabriel Jesus oo daqiiqadii 13aad shabaqa gaaray iyo waliba Raheem Sterling oo 3-0 ka dhigay daqiiqadii 37aad ee qeybta koowaad.
Goolka qura oo ay kulankaan ka heshay Everton ayaa waxay uga mahad-naqeysaa ciyaaryahankeeda lagu magacaabo Yannick Bolasie, kaasoo dhaliyay daqiiqadii 63aad ee qeybta labaad wuxuuna ahaa gool aad qurux badan.
Guushaan ayaa waxay uga dhigan tahay Man City inay hada ay leedahay 84 dhibcood marka laga hadlo shaxda kala horeynta ee EPL-ka, iyadoona hadii ay badiso labadda kulan ee soo aadan kor uqaadi karta horyaalka Premier League.
Sidoo kale, guushaan ayaa waxay uga dhigan tahay Sky Blues inay noqotay kooxdii ugu horeysay ee EPL-ka ah, taasoo kaliya hal ciyaareed awood uyeelata inay cagta ay mariso dhamaan kooxaha ka dheelaya xagaagas EPL.
Sikastaba, Man City ayaa waxay ahayd mida ugu badan ee kubada haysata kulanka, iyadoona gacanta ku haysatay 85 boqolkiiba, halka Everton ay haysatay 15 boqolkiiba, taasoo marag fur u ah, in gacanta sare ee kulanka ay ahayd Manchester City.
Bale Iyo Benzema Oo Ka Caawiyay Real Inay Xaaqdo Las Palmas